गतिहीन नेकपा र मुद्दाबिहीन काँग्रेस – Vision Khabar
। १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार १९:३७ मा प्रकाशित
नेताहरुको आफ्नै खण्डित मनोदशाले जनताको भरोसा र बिश्वासलाई थाम्न र बोक्न संभब हुदैन । पार्टी एकिकरण प्रक्रियाको ढिलाइले क्रमश जनबिश्वास टुक्रदै र खस्कदै गएको नेकपाले समयमा बुझ्न नसके भोली परिबर्तनका बिरोधीहरु अध्यारो कुना र मसानघाटबाट धावा बोल्ने छन ।
बर्तमान नेपालको राजनीतिक अबस्था हेर्दा मुलकका दुई ठुला शक्तिहरु गतिहीन र मुद्दाबिहीन बनेका छन । २०७४ को आम निर्बाचनपछि स्थापित पहिलो र दोस्रो शक्तिको यो स्थितिले देशमा परिबर्तन र राष्ट्रियता बिरोधि शक्तिले बिखण्डन र प्रतिगमनको सपना देख्न थालेका छन । यद्यपि यस्तो सपना नेपाली जनताको आजको आधुनिक राजनीतिक चेतनाले आत्मसाथ अबलम्बन गर्ने संभावना छैन । तर देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिको गतिहिन र मुद्दा बिहीन अबस्था भने देश र जनताका लागि प्रतिउत्पादक मान्नै पर्छ ।
संघिय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा दुइतिहाइ जनमत प्राप्त नेकपा अहिले राजनीतिक रुपमा गतिहीन अबस्थामा छ । जनताले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सामाजिक परिबर्तनका लागि निर्बाचनमा नेकपाको पक्षमा जनमत जाहेर गरेका हुन । पार्टी रानीतिक रुपमा गतिहीन हुदा जनमतको सम्मान होइन अपमान हुदै गएको छ । अब नेकपा काँग्रेसको बिकल्प मात्र होइन राष्ट्रको पहिलो राजनीतिक शक्ति हो । नेकपाका सामु सरकार संचालन गर्ने होइन देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने अभिभारा नेपाली जनताले सुम्पेका छन । तर अहिलेको राजनीतिक गतिहीनताले सरकारले अघि सारेको सुखि नेपाली र सम्बृद्ध नेपालको नारा नै कसरी पुरा गर्न सम्भब छ नेकपाका लागि । कतिपय नेकपाका माथिल्लो तहका नेताले नै पार्टी र सरकारलाइ अलग राखेर अभिब्यक्ति दिने गरेका छन । यो त ब्यक्तिगत मनोकांक्षा मात्र हो जनताको मनोबिज्ञानमा नेकपा र बर्तमान सरकारलाइ अलग देख्ने दृष्टिकोण छैन । पार्टीको सुस्तताले जनताको मनमा होइन नेकपाका नेता कार्यकर्ताको मानष्पटलमा समेत गंभिर प्रश्न खडा गरेको छ । अहिले पार्टी एकिकरण प्रक्रिया कछुवाको गतिमा रहनुले नेकपाका लागि मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्र र ठुलो बलिदानीबाट प्राप्त राजनीतिक ब्यबस्थाको संस्थागत विकास पनि गतिहीन अबस्था सिर्जना हुन थालेको छ । जसको प्रभाब समग्र नेपालको विकास प्रक्रिया देखिएको छ । पार्टी एकिकरणको प्राबिधिक प्रक्रिया चाँडो सकेर नेता कार्यकर्ताका बिचमा भावनात्म सम्बन्ध बिस्तार गरी एकिकृत संगठन परिचालन गर्न नसके जनतामा रहेको नेकपा प्रतिको राजनीतिक बुझाइ र बिश्वास पनि खण्डित हुदै जाने पक्का हो । नेता कार्यकर्ता बिचको भावनात्म एकताले नै जनतामा रहेको पार्टी प्रतिको भरोसा र बिश्वास बलियो बनाउने हो । नेताहरुको आफ्नै खण्डित मनोदशाले जनताको भरोसा र बिश्वासलाई थाम्न र बोक्न संभब हुदैन । पार्टी एकिकरण प्रक्रियाको ढिलाइले क्रमश जनबिश्वास टुक्रदै र खस्कदै गएको नेकपाले समयमा बुझ्न नसके भोली परिबर्तनका बिरोधीहरु अध्यारो कुना र मसानघाटबाट धावा बोल्ने छन । यसको अपजस मुलतः नेकपाले लिनुको अर्को बिकल्प रहने छैन । तसर्थ निर्बाचनबाट प्राप्त जनमतको सम्मान गर्दै भावि जनअपेक्षाहरुको खोजि गरेर सरकार संचालन पार्टी परिचालन गर्नु नेकपाको आजको अभिभारा हो । अहिले नेकपाको राजनीतिक गतिहिनताले चौतर्फि रुपमा बिखण्डनकारी र प्रतिगमनकारीलाई आत्मरतिमा रमाउने अबसर सिर्जना गरेको छ ।
अर्को राजनीकि शक्ति नेपाली काँग्रेस ईतिहासमा सबभन्दा कजोर साबित भएको छ । पछिल्लो चुनाबको परिणामले मात्र होइन आजको भूमिकाले पनि काँग्रेस कमजोर भएको साबित गरिसकेको छ । इतिहासको ब्याज उठाएर काँग्रेस अगाडी किमार्थ बढ्न सक्दैन । निर्बाचनमा जनताले बहिष्कृत गरेका मुद्दा बोकेर अहिले पनि काँग्रेस सदनमा रमाइरहको छ ।
सत्ता संचालन गर्ने पार्टी आफैमा गतिहीन हुदा सरकारले लिएका लक्ष्यहरु स्वभाबिक रुपमा पुरा गर्न कठिन हुन्छ । आज तल्लो तहसम्म नेकपाले पार्टीको संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा सत्ता संचालनमा अराजकता र अकर्मण्यता सिर्जना हुदै जान थालेको छ । निर्बाचित जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक रुपमा नियन्त्रण, निर्देशन र पार्टीको नीति अनुरुपमा चलाउने निकाय नहुदा जनताले काँग्रेस र कम्युनिष्ट बिचको भिन्नता भुल्दै जान थालेका छन । चुनाबका बेला जनताका बिचमा काँग्रेस भन्दा कम्युनिष्टले भिन्न र जनपक्षिय ढंगले सत्ता संचालन गर्छ भनि गरेको प्रतिबद्धता उदाङ्गिदै गएको छ । जनताले बुझेको काँग्रेस र कम्युनिष्ट बिचको सैद्धान्तिक, दार्सनिक र राजनीतिक भिन्नतालाई जनप्रतिनिधिहरुले ब्यबहारिक अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । आज त्यो हुन सकेको छ कि छैन ? नेकपाको लागि समिक्षा र योजना निर्माणको बिषय हो । तर लाखौं नेता कार्यकर्ताहरु आफै अन्यौल र अलमलमा परेका छन । प्रभाबकारी सरकार संचालन, जुजारु संगठन निर्माण तथा गतिशिल जनपरिचालन गर्न नेकपाले किन सकेको छैन ? आम नेपाली जनता यहि प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन । ब्यबस्थित रुपमा राज्य संचालन गर्न गतिशिल रुपमा पार्टी परिचालन अनिबार्यता हुन्छ । यो अहिले नेकपाले गर्न नसकेको यथार्थ पक्ष हो । अब नेकपाले पार्टीे एकिकरणका सम्पूर्ण काम अभिलम्ब सकेर संगठन परिचालनमा आम जनतालाइ गोलबन्द गरी राष्ट्रिय सम्बृद्धिको यात्रालाई फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । आजको गतिहीनताले भोलीको राजनीतिक पतन बाटो खोल्न सक्छ । नेताको होइन पार्टीको राजनीतिक भबिश्य सुरक्षित गर्न र जनताको आर्थिक सामाजिक परिबर्तनको सपनालाई पुरा गर्न नेकपाले राजनीतिक गतिशिलता बढाउनै पर्छ । आज देशी बिदेशि शक्तिकेन्द्रहरु नेकपाभित्र बिग्रहको सुत्र खाज्दै छन । यस्तो सुत्रको अभ्यासकर्ता पार्टी भित्रबाटै जन्माउने अनेकन प्रयासहरु जारी छन । सबै खाले यस्ता षडयन्त्र र योजना बिफल बनाउन नेकपाले राजनीतिक गतिहिनतालाइ चिर्दै अगाडी बढ्न सके बर्तमान मात्र होइन भाबि नेपालको मुल राजनीतिक शक्ति नेकपा नै हो ।
अबको राजनीतिक कार्यभार भनेको आर्थिक सम्बृद्धिकरण नै हो । यस तर्फ काँग्रेस बृतमा कतै बहस र छलफल भएको देखिदैन । सरकारको आलोचना गरेर मात्रै आर्थिक सम्बृद्धिकरणको यात्रामा काँग्रेस कसरी हिड्न सक्छ ? जुन सम्भब छैन । यस्तो परिबेशमा परम्परागत काँग्रेसको जनआधार भत्एिको छ । तर नयाँ जनआधार निर्माण गर्ने राजनीतिक मुद्दा र दृष्टिकोण काँग्रेससंग छैन ।
अर्को राजनीकि शक्ति नेपाली काँग्रेस ईतिहासमा सबभन्दा कजोर साबित भएको छ । पछिल्लो चुनाबको परिणामले मात्र होइन आजको भूमिकाले पनि काँग्रेस कमजोर भएको साबित गरिसकेको छ । इतिहासको ब्याज उठाएर काँग्रेस अगाडी किमार्थ बढ्न सक्दैन । निर्बाचनमा जनताले बहिष्कृत गरेका मुद्दा बोकेर अहिले पनि काँग्रेस सदनमा रमाइरहको छ । चिकित्सा शिक्षा बिधेक पारित गर्दा सदन अबरुद्ध गर्न पुगको काँग्रेस आफ्ना नेताका नाममा नामाकरण गरिएका दुई अस्पताल संघिय सरकार मातहत राख्ने सहमतिमा सदनको अबरोध हटाउनुले उसको राजनीतिक हैषित प्रष्ट भएको छ । समय सापेक्ष मुद्दा बोक्न र खोज्न नसकेर कोही ब्यक्तिका ब्यक्तिगत लहड र रहर बोकेर बेला बेलामा सदनमा रमिता देखाउछ, अनि सडकमा उपस्थिति जनाउछ । सदनमा कमजोर साबित काँग्रेस सडक पनि पातलो हुदै जानुको बिकल्प छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाबकारी भूमिका खेल्न नसकको काँग्रेसका लागि जनताका बिचमा न हिजोको दाबी बिश्वासिलो छ न भोलीको आस्वासन यस्तो हालतमा काँग्रेस उभिएको छ । परिबर्तित सन्दर्भमा काँग्रेसले पार्टीको संरचनालाइ ब्यबस्थित रुपमा संघिय ढाँचामा रुपान्तरण गर्न नसकेर नीति र नेतृत्व दुबै स्खलित हुदै गएको छ । महासमितिको बैठकमा पनि परिबर्तित राजनीतिक ब्यबस्था अनुरुप नयाँ मुद्दामा बहस नभएर धर्मनिरपेक्षतार हिन्दुत्वको बहस हुनु काँग्रेसका लागि सुखत बिषय हुन सक्दैन । लोकतन्त्रलाइ आदर्श ठान्ने काँग्रेस अहिले राजनीतिक बादको बहसमा भन्दा संबिधानबादको बिश्वासमा उभिनु पर्ने हो तर लरबराइ रहेको छ ।
राजनीतिक गतिहीनताले जननिर्बाचित संस्थाहरु बिस्तारै अलोकप्रिय र असक्षम बन्दै जाने खतरा बढेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ राजनीतिक अभ्यासमा संघ निरंकुश, प्रदेश निरिह र स्थानीय तह अराजक बन्दै गएको देखिन्छ ।
अबको राजनीतिक कार्यभार भनेको आर्थिक सम्बृद्धिकरण नै हो । यस तर्फ काँग्रेस बृतमा कतै बहस र छलफल भएको देखिदैन । सरकारको आलोचना गरेर मात्रै आर्थिक सम्बृद्धिकरणको यात्रामा काँग्रेस कसरी हिड्न सक्छ ? जुन सम्भब छैन । यस्तो परिबेशमा परम्परागत काँग्रेसको जनआधार भत्एिको छ । तर नयाँ जनआधार निर्माण गर्ने राजनीतिक मुद्दा र दृष्टिकोण काँग्रेससंग छैन । पुराना मुद्दा र दृष्टिकोणबाट काँग्रेस हिजोसम्म सफल भएकै हो । तर अहिलेको समय सान्दर्भिक मुद्दा र दृष्टिकोण निर्माणमा काँग्रेस पूर्ण रुपमा चुकेको छ । सत्ता संचालनमा असफल र अयोग्य साबित काँग्रेस जनताका बिचमा नेकपापछि बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखिन नसक्नुले नेकपा असफल र अयोग्य भए बिकल्प के ? उत्तर आजको राजनीतिक ब्यबस्थाको बिकल्प नै हो । त्यो बिकल्पकोे खोजि मसानघाटमा पुगेर हुन्छ अब । या त नेपाल असफल राष्ट घोषणा यति पर नपुगे पनि आजको राजनीतिक ब्यबस्था र यसका संचालक प्रति जनताको अबिश्वास र आक्रोस जन्मिए समाधान के नेपाली राजनीतिको प्रश्न यहि हो ।
राजनीतिक गतिहीनताले जननिर्बाचित संस्थाहरु बिस्तारै अलोकप्रिय र असक्षम बन्दै जाने खतरा बढेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ राजनीतिक अभ्यासमा संघ निरंकुश, प्रदेश निरिह र स्थानीय तह अराजक बन्दै गएको देखिन्छ । तर संघात्मक राज्य ब्यबस्थामा नियन्त्रण, सन्तुलन र समुन्वयका आधारमा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । अभ्यासमा देखिएको अन्यौलता राजनीतिक गतिशिलताको नियममा समाधान गर्नु पर्ने खाँचो झन बढेर गएको छ । सत्तापक्षको अहमता र प्रतिपक्षको हीनताले राजनीतिक सहमति, सहकार्य र एकताको अपरिहार्यता बिस्तारै खस्कदै गएको छ । परिबर्तनका साझेदार शक्तिहरुको बेमेल राष्ट्रका लागि हितकर हुनै सक्दैन ।
कुनै पनि मुलुकका लागि मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु गतिहीन र मुद्दाहीन हुनु राम्रो मानिदैन । यस्तो राजनीतिक अबस्थामा बैदेशिक प्रभाब बढेर हस्तक्षेपमा रुपान्तरण हुने खतरा हुन्छ । आज प्रत्यक्ष बैदेशिक प्रभाब र हस्तक्षेप नदेखिए पनि प्रयास भएका छैनन भन्न सकिन्न । कसैले यो सत्यलाइ गलत ठान्छ भने राजनीतिक बुझाइको अल्पज्ञान मात्र हो । फेरी यहि मौकामा देश भित्रका पर्तिगमनकारी र परिबर्तन बिरोधीहरुले खुलेआम बैदेशिक हस्तक्षेपलाइ आमन्त्रण गर्छन । हाम्रो जस्तो भरखरै राजनीतिक संक्रमणकाल पुरा गरेको देशका लागि यो शुभ राजनीतिक संकेत होइन । सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीले जनबिश्वास गुमाउदा प्रतिपक्षले कमाउने हो तर आज नेपालको सन्दर्भमा प्रतिपक्ष झन कमजोर मुद्दाबिहीन अबस्थामा छ ।
केन्द्रिय उपाध्यक्ष प्रेस चौतारी नेपाल